Lanzarote: ihe ị ga-ahụ | Akụkọ njem
Mariela Carril | 30/12/2021 17:00 | Lanzarote, Ihe ị ga-ahụ
Lanzarote bụ agwaetiti nke Canary Islands, na ebe ọ bụ na 1993 ya niile bụ Reserve Banyere Ebe Ọgwụ. Cheedị echiche mgbe ahụ ịma mma ya! Ọ bụ nke anọ kasị ukwuu n'àgwàetiti otu na mara aha nke "Agwaetiti nke ugwu mgbawa".
Taa, anyị ga-achọpụta ihe ị na-apụghị ịkwụsị hụ na Lanzarote.
2 Ihe ị ga-ahụ na Lanzarote
Àgwàetiti ahụ dị ihe dị ka kilomita 140 site n'ụsọ oké osimiri Africa na ihe dị ka 1000 site na kọntinent Europe. Nwee obi ụtọ a subtropical ihu igweMmiri na-ezo ntakịrị na ọnụ ọgụgụ ya kachasị elu bụ Las Peñas del Chache nke nwere mita 671 n'ịdị elu.
Dị ka anyị kwuru na mmalite na 1993 UNESCO kwupụtara ya Reserve Banyere Ebe Ọgwụ na ọ bụ ezie na ọ bụ omenala etinyere ya maka ọrụ ugbo na ịkụ azụ ruo oge ụfọdụ n'akụkụ a Akụ na ụba ya na-arụ ọrụ na gburugburu njem nlegharị anya.
Ihe ị ga-ahụ na Lanzarote
N'ịbụ onye a na-akpọ "agwaetiti nke ugwu mgbawa" ihe mbụ ị ga-ahụ bụ kpọmkwem ugwu mgbawa. Ọ bụ ezie na ha agbawabeghị kemgbe 1824, ha ka na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ahụ mere na etiti narị afọ nke XNUMX ahaziwo enyemaka ahụ na a. ala dị ịtụnanya juputara na basalt nke na-ekpuchi agwaetiti ahụ n'ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ. Taa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogige ntụrụndụ mba na ya mere anyị nwere Timanfaya National Park.
Eziokwu bu na nke a Okirikiri ọnwa Ọ dị egwu ma n'agbanyeghị na ọ dị ize ndụ iji ụkwụ nyochaa ya, ị nwere ike were a njem ụgbọ ala Nke ahụ na-ewe gị ịhụ osimiri lava na ihe dịka olulu 25. Na Montañas de fuego ị ga-ahụ ndị nduzi obi ike na-abanye n'ime oghere dị egwu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ El Diablo a na-esi nri ozugbo site na iji okpomọkụ geothermal. Ihe ịtụnanya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọhụrụ ọhụrụ mgbe ahụ na-eche free inyocha na a Ụgbọ ala eletrik Twizy.
Ogige ntụrụndụ a dị na obodo Tinajo na Yaiza na Ọ bụ ogige ntụrụndụ mba nke abụọ n'ọtụtụ nleta. Ọ bụ ogige ntụrụndụ mba kemgbe 1974 wee were mpaghara ihe dịka square kilomita 52, na ndịda ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ.
Ọzọ eke mma bụ Jameos del Agua ọgba. Ọ bụ usoro nke Ọgba ndị dị n'okpuru ala na-emeghe mgbe ụfọdụ ruo na mbara igwe na nke nwere taa ọdọ mmiri, ụlọ mgbakọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ihe niile e wuru n'etiti nkume na mmiri nke na-agbada mgbidi.
Ọ fọrọ nke nta ka a fantasy odida obodo na ọ bụ onye omenkà César Manrique mere. Mgbe anyanwụ dara, egwu na-agbanye na e nwere ihe omume gastronomic ya mere nwee ụfọdụ oriri. Ụdị James Bond? Nwere ike ịbụ. Enwere ike inyocha usoro ọgba aghara site n'enyemaka nke ntuziaka.
Ebe ọzọ bụ Obodo Haría, n'elu ugwu, n'etiti osisi okpomọkụ, ụlọ ọcha na nkwụ. Nke a bụ ebe e nwere ụlọ onye na-ese ihe anyị kpọrọ aha na mbụ, César ManriqueKe adianade do, a pụrụ iche ebe ị pụrụ ịhụ ya ochie studio, niile na ihe bụ otu ugbo na omenala agwaetiti ije. Ụlọ ihe ngosi nka na-emeghe kwa ụbọchị site na 10:30 am ruo 6 pm na nnabata na-efu 10 euro.
Obodo kacha ochie na Canary Islands bụ Teguise, obodo tọrọ ntọala na 1402. Ọ bụ isi obodo nke agwaetiti ahụ maka afọ 450 na ọ bụ n'ebe dị elu. Ọ na-echekwa ọtụtụ ụlọ bara uru, nkwụ na ámá na n'ụbọchị Sọnde a na-eguzobe ahịa dị egwu ebe ị nwere ike ịzụta ihe niile site na cheese ruo na akpa akpụkpọ anụ. Ma ọ bụrụ na ị hụla Manqrique n'anya na ihe ndị o kere, ị nwere ike ịga leta ụlọ ọzọ ejiri lava na ọgba rụọ na Nazaret agbata obi.
Obodo ọzọ na-adọrọ mmasị ma maa mma, ma n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ, bụ Arieta. Nwere ọmarịcha ọcha aja osimiri, Playa de La Garita, na ọdụ ụgbọ mmiri nwere ụgbọ mmiri ịkụ azụ. Ọ bụ a dị mfe na oké ebe iri n'ihi na ebe a Marriqueria el Charcon, kpọmkwem n'ebe ahụ n'osimiri na na nwude nke ụbọchị. Igwe oyi agaghị ekwe omume.
Ọ bụrụ na-amasị gị cacti, mgbe ahụ, ọ bara uru ịga njem nleta Ogige CactusEnwere nha na ụdị dị iche iche, ekesara dị ka ebe a na-eme ihe nkiri n'ime ebe a na-egwupụta ihe ochie. Ee ihe a niile ọzọ Ọ bụ ọrụ César Manqrique. Enwere Ụdị 4500 nke ụdị 450 na n'ezie e nwere mmanya / cafeteria na-ere burgers ndị yiri cactus na ọhụrụ juices.
Maka ụlọ ngosi ihe mgbe ochie enwere Museo Atlántico, ụlọ ihe ngosi nka mbụ n'okpuru mmiri na Europe, nso Marina Rubicon. Nke a bụ ụgbọ mmiri na-arụsi ọrụ ike nke nwere cafes na-ele anya n'oké osimiri ma dị na nsọtụ ndịda nke obodo Puerto del Carmen, ndị njem nlegharị anya niile na ọrụ n'efu. N'okpuru oké osimiri, e nwere ihe osise na ihe ọkpụkpụ nke onye omenkà Jason deCaires Taylor mere.
Oge emeela ka ihe ndị dị n'oké osimiri na-achị ha niile n'ihi na ọ bụ ihe nkiri n'ezie. Ma ee, nnukwu ebe ị ga-esi na-egwu mmiri na omimi nke mita 12.
Ọzọkwa enwere ọdọ mmiri okike ebe ị nwere ike igwu mmiri. Ọ bụ ihe gbasara ọdọ mmiri mmiri dị n'akuku ọwụwa anyanwụ na ndịda na na ha abụghị ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga nkume e kere eke nke agbakwunyere na naanị ole na ole nzọụkwụ iji mee ka ha dịkwuo mfe ma dị mma. Ha na-ele anya n'oké osimiri mana ha dị jụụ ma dịkwa mma maka igwu mmiri. Ọmụmaatụ, Na-atụ ụmụ nwanyị n'ebe ugwu na Ndị Charcones nso Playa Blanca.
Ogbu bụ ngalaba nke ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ, a Oke ugwu mgbawa ugwu nke ndị bi na ya ejirila chọta cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ebili mmiri nke oge ụfọdụ na-enye igirigi ma na-agba mmiri mana echiche ahụ bara uru. N'ozuzu, ndị na-eleta El Golfo na-eleta Ihe etuto ahụ, ọzọ nke ebe kacha mma ịhụ ike nke oke osimiri nsoo.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na-amasị gị ịkwọ ụgbọ mmiri enwere Famara. Ndị na-anya ụgbọ mmiri si n'akụkụ ụwa niile na-abịa ebe a, ruo n'ala ájá nke dị kilomita ise, na obere obodo dị nso, ụlọ mmanya na cafes na ụlọ mbikọ. Nke Papagao Beach Ọ mara mma nke ukwuu ma ọ bụghị n'ezie otu osimiri kama ọ bụ asaa, ma ọ bụ kama nke ahụ, usoro osimiri na-acha odo odo na ndịda, nke nkume lava kewapụrụ.
A na-echekwa ha n'ihi na ọ dịghị mmiri iyi na mmiri adịghị mma. N'ezie, ọ bụghị naanị n'ụsọ osimiri dị n'àgwàetiti ndị ahụ, n'ezie, e nwere oke aja aja nke Playa del Charco de los Clicos nke nwere nkume na-acha ọbara ọbara na ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọtụtụ agba, ma nke a nwere nnukwu ájá dị nro. igwu mmiri dịkwa mma.
Ọgba nke Greens bụ ohere kacha mma banye n'ime tube nke lava siri ike. Enwere njegharị! Anyị enweghịkwa ike ichefu isi obodo nke agwaetiti ahụ, Arrecife, nso ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ ndị mara mma, nke ị na-eji ụgbọ mmiri si Mirador del Río rutere. Bụ a obere agwaetiti nke nwere mmadụ ole na ole, enweghị okporo ụzọ awara awaraỌ ka njọ nke ị nwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe wee gaa ije iji chọpụta osimiri ya.
N'ikpeazụ, ọ dịghị njem na-enweghị nri na ihe ọṅụṅụ na nke a Lanzarote nwere ezigbo mmanya na ha bara uru ịnwale. Ụlọ mmanya na ihe ubi dị n'ime geria, ndagwurugwu ahụ bụ ógbè ndị na-amị mmanya n’agwaetiti ahụ. A na-atọkwa nri mgbe niile na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ahịa, n'ezie.
Njem ụbọchị? Fuerteventura. Ụgbọ mmiri na-agafe ya, ị nwere ike ịga na Corralejo na Corralejo National Park wee laghachi Lanzarote na mgbede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Lanzarote » Lanzarote: ihe ị ga-ahụ